Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara "mbara ala" Pluto | Netwọk Mgbasa Ozi
The "mbara" Pluto
Pluto, uwa echefuru echezighi uwa. Na nke anyi Usoro anyanwụ enwere mbara ala iteghete tupu oge edozigharị ma ọ bụ ihe na-abụghị ụwa ka Pluto ga-apụta site na njikọ nke mbara ala. Mgbe afọ 75 dị na mbara ụwa, na 2006 e lere ya anya dị ka Dwarf Planet. Agbanyeghị, mkpa mbara ala a dị oke mma, ebe ọ bụ na akpọrọ ihe ndị dị na mbara igwe gabigara na mbugharị ya Plutoid.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe nzuzo niile na njirimara nke dwarf planet pluto. You chọrọ ịmatakwu banyere ya? Gụọ na-amụkwu.
1 Njirimara Pluto
2 Ozi gbasara dwarf planet
3 Eluigwe na mejupụtara
4 Ntughari nke Pluto
Warwa a na-agba gburugburu na-agba anyanwụ gburugburu kwa afọ 247,7 ma na-eme nke a site na njem ogologo njem nke ijeri kilomita 5.900. Ihe a na-etinye na Pluto bụ nha puku abụọ na otu narị na iri abụọ na otu nke ụwa ma ọ bụ otu ụzọ n’ụzọ ise nke ọnwa anyị. Nke a na - eme ka ọ pere mpe were dị ka ụwa.
Ọ bụ eziokwu na afọ 75 ọ bụla mbara ala site na International Astronomical Union. N’afọ 1930 ka a kpọrọ ya aha chi Rome nke okpuru ala.
N'ihi nchọpụta nke mbara ala a, a chọpụtala ọtụtụ ihe mgbe ochie dịka Kuiper Belt. Ọ na-atụle ndị kasị ibu dwarf planet na n’azu ya Eris. Ihe mejuputara ya bu otutu ice. Anyị na-ahụ ice mere nke methane oyi, mmiri ọzọ, na okwute ọzọ.
Ihe omuma di na Pluto amachi oke ebe obu na teknụzụ kamgbe afọ 1930 amachaghị oke iji nye oke nchoputa nke ahụ si Earthwa Ruo mgbe ahụ ọ bụ naanị ụwa nke mbara igwe na-agabeghị.
Na Julaị 2015, site na njem oghere ọhụrụ nke hapụrụ ụwa anyị na 2006, ọ nwere ike iru ụwa mbara ala ahụ, nweta ọtụtụ ozi. Ozi ahụ were otu afọ iji ruo ụwa anyị.
Ozi gbasara dwarf planet
N'ihi mmụba na mmepe nke teknụzụ, a na-enweta nnukwu nsonaazụ na ozi gbasara Pluto. Orzọ mbata ya bụ ihe pụrụ iche nke ukwuu ya na mmekọrịta ya na satịlaịtị ya, axis nke ntụgharị, na ọdịiche dị n'iche ọkụ na-erute ya. Ihe mgbanwe ndị a niile na-eme ka mbara ala a bụrụ ihe na-adọrọ mmasị maka ndị sayensị.
Ọ dịkwa ọzọ site na Sun karịa ụwa ndị ọzọ nke mejupụtara usoro mbara igwe. Agbanyeghị, n'ihi oke ikuku nke orbit, ọ dị nso karịa Neptune maka afọ 20 nke orbit ya. Na Jenụwarị 1979 Pluto gafere orbit nke Neptune ma nọrọ nso na Sun ruo na March 1999. Ihe omume a agaghị eme ọzọ rue Septemba 2226. N'agbanyeghị eziokwu na otu mbara ala na-abanye na mbara igwe nke ọzọ, enweghị ohere ikukpọ. Nke a bụ n'ihi na orbit nke 17,2 degrees gbasara ụgbọ elu nke ecliptic. N'ihi nke a, ụzọ nke orbit pụtara na ọ dịghị mgbe achọtara mbara ala.
Pluto nwere ọnwa ise. Ọ bụ ezie na ọ dị obere pere mpe ma e jiri ya tụnyere ụwa anyị, ọ karịrị ọnwa anọ karịa anyị. A na-akpọ ọnwa kasị ukwuu Charon ma ọ hà ka ọkara nha Pluto.
Eluigwe na mejupụtara
Ọnọdụ Pluto bụ nitrogen 98%, methane na ụfọdụ mmetụta nke carbon monoxide. Ikuku ndị a na-arụ ọrụ n'elu ụwa. Agbanyeghị, ọ bụ ihe dị ka 100.000 na-esighi ike karịa nrụgide dị n 'elu ụwa.
Enwekwara methane siri ike, ya mere a na-eme atụmatụ na ọnọdụ okpomọkụ dị na mbara ụwa a ndị na-erughị ogo 70 Kelvin. Ruru ka peculiar ụdị orbit, okpomọkụ nwere pụtara nnukwu nso nke mgbanwe ofụri ya. Pluto nwere ike ịbịaru Sun nso na 30 Igwe Astronomical wee pụọ ruo mgbe 50. Ka ọ na-esi na Anyanwụ pụọ, ikuku dị nkenke pụtara na mbara ụwa nke kpọnwụrụ ma daa n'elu.
N'adịghị ka mbara ala ndị ọzọ dị ka Saturn y Jupita, Pluto dị oke okwute ma e jiri ya tụnyere mbara ala ndị ọzọ. Mgbe emechara ọmụmụ ihe ahụ, emechiela na, n'ihi obere okpomọkụ, a na-agwakọta ọtụtụ okwute na mbara ala a na ice. Ice dị iche iche dị ka anyị hụburu. Mixedfọdụ agwakọtara na methane, ndị ọzọ ejiri mmiri, wdg.
Enwere ike ịtụle nke a nyere ụdị ngwakọta kemịkalụ nke na-eme na obere okpomọkụ na nrụgide n'oge nguzobe nke ụwa. Fọdụ ndị ọkà mmụta sayensị emeela otú ahụ tiori na Pluto bu ezigbo uzo nke Neptune. Nke a bụ n'ihi na ọ ga-ekwe omume na a tụbara mbara ụwa a dị omimi na orbit dị iche n'oge e guzobere usoro mbara igwe. Ya mere, a ga - ehiwe Charon site na ngwakọta nke ihe ọkụ ọkụ na - esite na nkwekọrịta.
Ntughari nke Pluto
Pluto na-ewe ụbọchị 6384 iji gafee onwe ya. ebe ọ bụ na ọ na-eme ya na ụzọ mmekọrịta yana orbit nke satịlaịtị ya. N'ihi nke a, Pluto na Charon na-enwe otu ihu na ihu. Ihe ntụgharị nke ụwa bụ ogo 23. N'aka nke ọzọ, nke planetoid a bụ ogo 122. Osisi ndị ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ụgbọ elu ha.
Mgbe a hụrụ ya mbụ, a hụrụ nchapụta sitere na osisi ya ndịda. Ka anyị na-ele Pluto anya, ụwa yiri ka ọ ga-agbapụ. Ugbu a anyị nwere ike ịhụ ikuku nke mbara igwe a site na ụwa.
N’agbata afọ 1985 na 1990, ụwa anyị a kwekọrọ na orbit nke Charon. N'ihi nke a, enwere ike ịhụ chi jiri n'ehihie nke ụbọchị ọ bụla nke Pluto. N'ihi eziokwu a, enwere ike ịnakọta ọtụtụ ozi gbasara albedo nke mbara ala ahụ. Anyị na-echeta na albedo bụ ihe na-akọwapụta ngosiputa nke mbara ala nke radieshon nke anyanwụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu mbara ala Pluto na ịmata ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » The "mbara" Pluto
Daniela Morales Hernandez dijo
Ekele m, ọ nyeere m aka ịrụ nnukwu ọrụ !!
Zaghachi Daniela Morales Hernández